तपाइँले अन्तिम पटक कहिले गर्नुभयो यौन सम्पर्क ? फेसबुकले थाहा पाउँछ ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more तपाइँले अन्तिम पटक कहिले गर्नुभयो यौन सम्पर्क ? फेसबुकले थाहा पाउँछ !
एजेन्सी । तपाइँले अन्तिम पटक कहिले यौन सम्पर्क गर्नुभयो रु यो कुरा फेसबुकलाई थाहा हुन्छ । यतिमात्र होइन महिलाहरुको महिनावारी चक्र तथा उनीहरुले प्रयोग गरेका गर्भनिरोधक साधनहरुको बारेमा पनि फेसबुकले थाहा पाउँछ ।